Fancy Fireflies-Enomtsalane studio Khabhinethi e Hayward - I-Airbnb
Fancy Fireflies-Enomtsalane studio Khabhinethi e Hayward
Ijikelezwe yimithi, izinze kanye kwiLake Hayward ihlala le khabhathi inomtsalane kwaye icocekile kwindawo encinci yekhabhathi engaphantsi kwesiqingatha semayile ukusuka edolophini yaseHayward. Qalisa iphenyane lakho nje amanyathelo ukusuka ekungeneni kwekhabhathi, ibhayisekile ukuya edolophini kwisidlo sasemini, okanye uhambe intaba okanye utyibilize kwiindlela ezikufutshane, le khabhathi ibekwe kwindawo efanelekileyo!
Le yikhabhathi epholileyo, enesayizi yestudiyo enebhedi yokumkanikazi enye, igumbi lokuhlambela, ikhitshi elinefriji encinci, imicrowave, iKeurig ikofu kunye negrill yangaphandle.
Le yindlu yamaplanga entle phakathi e-Hayward nenendlela elula yokufikelela yonke into oza kufuna ukuyenza ngexesha lokuhlala kwakho apha! Siyazidla ngokwenza konke okusemandleni ethu ukuze ukuhlala kwakho kube mnandi enoba uceba ukusebenzisa indlu yamaplanga njengendawo yakho yokukhempisha ngoxa ubuka iHayward kunye neendawo ezikufutshane okanye ugqibe ekubeni uhlale kuyo, uphumle uze uphole. Sisoloko siphucula size siphucule ukuze ukonwabele ukuhlala kwakho. Kunyaka ophelileyo sodwa sifake iveranda enezihlalo zangaphandle, satshintsha umgangatho, safaka izibane ezintsha, sakha itafile yangaphakathi ukuze sikwazi ukupheka, sitshintshe umatrasi omtsha kunye nebhedi eyakhiwe ngaphakathi, saza sanyuselwa kwi-smart TV ukuze ungene kwaye ubukele yonke imiboniso oyithandayo usekhaya ukongezelela kwi-cable TV enikezelweyo.
Ungakhathazeki - kubonakala ngathi kukho iindawo eziyi-2 zokungena apha - kodwa umnyango wesibini ligumbi lokugcina izinto. Le yindlu yakho yamaplanga!
Ukufikelela lula usebenzisa ikhowudi ebalulekileyo kunye nesitshixo.
Siyazithanda kwaye sineenja ezininzi kwaye siyayazi ukuba kubaluleke kangakanani ukuzisa i-pooch yakho kwinto yakho yokuzonwabisa. Siyazamkela izilwanyana zasekhaya kodwa nceda usazise ukuba uceba ukuza nezakho, njengoko sibhatalisa imali yokucoca ($ 30 ngokuhlala kwakho). Kusenokufuneka sikuthumelele isicelo esahlukileyo sokubhatala. Sicela ukuba uyicoce emva kwenja yakho (ngaphakathi endlini yamaplanga nangaphandle), kwaye ungayishiyi inja yakho ingagcinwanga endlini yamaplanga ngaphandle kokuba i-kenneled.
Sinikezela ngezinto eziyimfuneko - iitawuli zokuhlamba, ishampu/i-conditioner, isepha, isepha yezitya, iikomityi zekofu, iipleyiti, izitya. Sinomatshini wokwenza ikofu weKeurig onekofu, iswekile kunye ne-creamer. Sinefriji encinci, i-microwave, i-toaster, i-grididle nesinki. Kukho igrili yangaphandle, kuza kufuneka uphathe amalahle kunye nezibane.
Sinemidlalo embalwa kwiidrowa ze-dresser onokuyisebenzisa.
Le yintsapho yamaplanga encinci enezindlu zamaplanga eziyi-8 xa zizonke kunye nezinye iindawo ezisetyenziswa nangabanye abantu - kukho iindawo zokubasa umlilo eziyi-2 onokuzisebenzisa, iitafile zepikiniki kunye nezibuko ezininzi. Ungazisa uze uvule isikhephe sakho okanye i-kayak apha emanzini.
IMIBUZO EDLA NGOKUBUZWA: Umbuzo:
Ngaba singafika ngaphambi kwexesha okanye siphume emva kwexesha?
A: Kuxhomekeke. Ixesha lokufika ngu- ngo-3 emva kwemini. Ndibuze ibe siza kwenza konke okusemandleni ethu ukukwazisa ngokukhawuleza xa indlu yakho yamaplanga ifumaneka. Thina kunye nabasebenzi bethu bokucoca sinemigaqo engqongqo yokulandela kwaye asinakusoloko siyilungisa indlu yamaplanga ngaphambi ko-3pm. Zive ukhululekile ukusebenzisa iindawo ezisetyenziswa ngumntu wonke ezifana neendawo zokubasa umlilo, amajelo kunye nonxweme kwangaphambili kodwa nceda uvumele abasebenzi bethu bokucoca indawo abayidingayo ukuze balungiselele kakuhle indawo yakho.
Umbuzo: Ngaba ikhona i-WiFi kwaye intle?
A: Ewe kwaye ewe! Siye sayiphucula i-router yethu ngo-2020. Siye saneendwendwe ezininzi ezihlalayo kwaye "sisebenzela ekhaya" nabafundi abagqiba umsebenzi wabo kwindlu yamaplanga ngaphandle kwesikhalazo esinye.
Umbuzo: Ngaba sine-cable TV?
A: Ewe, sine-TV. Sisandul 'ukunyuselwa kwiiTV eziphucukileyo ukuze ungene kwiinkonzo ozithandayo zokubukela kwi-intanethi. Ungalibali ukuphuma ngaphambi kokuba uhambe.
Umbuzo: Ngaba sineenkuni zokukhempisha?
A: Hayi, nangona kunjalo, ungathenga iinkuni kwiivenkile eziliqela zasekuhlaleni ezithengisa izinto eziluncedo kunye neevenkile zokutya nge- $ 5-6 ngenqaku ngalinye. Usenokubona neempawu zokuqhuba ukuze uthenge iinkuni kwiindawo zokuhlala ezahlukahlukeneyo. Kukho imigaqo engqongqo nxamnye nokuhambisa iinkuni ezivela kwezinye iindawo ngoko nceda ungayenzi loo nto. Amaxesha amaninzi iindwendwe zangaphambili ziza kushiya iinkuni ezingasetyenziswanga, ngoko usenokufumana nje ithamsanqa kwaye kungafuneki uthenge nantoni na. Asinikezeli ngokufanayo/izibane ezikhanyisayo.
Umbuzo: Ngaba amanzi akhuselekile ukuwasela?
A: Ewe! Sikumgca wamanzi wedolophu ngoko kukhuselekile ukusela nokupheka kunye. Kukho amanzi ashushu nabandayo.
Umbuzo: Ngaba kufuneka ndizicoce ngaphambi kokuba ndiphume?
A: Uh, hayi. Ngumsebenzi wethu lowo! Yonwabela nje ukuhlala kwakho. Zishiye ZONKE izitya ezisetyenzisiweyo/amacephe ukuze zincitshiswe iintsholongwane. Ungakhathazeki ngokulungisa ibhedi kuba siyawatshintsha amashiti. Nceda nje utshixe ucango uze ubuyisele isitshixo kwibhokisi enesitshixo.
Umbuzo: Kutheni imali yokucoca ibiza kangaka?
A: Nangona indlu yamaplanga incinci, kuthatha ixesha ukutshintsha ilinen, ukugcwalisa kwakhona, ukunciphisa iintsholongwane izitya, imophu, njl. Sizama ukubhatala abasebenzi bethu bokucoca umvuzo ophilayo size songeze kwiindleko zokuhlamba impahla nezinto eziqhelekileyo esinazo kwaye siyakhawuleza kakhulu. Asenzi okanye sizame ukwenza nayiphi na imali kwiindleko zokucoca.
Umbuzo: Ngaba ezinye izindlu zamaplanga zisondelelene?
Impendulo: Ewe, izindlu zamaplanga zidibene ngokusondeleyo. Unokuqonda ngokujonga zonke iifoto esizifakileyo. Ayizizo zonke izindlu zamaplanga eziqeshisayo okanye eziqeshisayo.
Umbuzo: Ngaba kukubhalisa xa ufika okungadibananga namntu?
A: Ewe, kukuzingenela nokuziphumela. Uza kufumana ikhowudi yokungena kwisitshixo sendlu yamaplanga kwibhokisi enesitshixo. Nceda ubuyise isitshixo xa uhamba. Kulula ngolo hlobo!
Umbuzo: Ngaba ndingadada echibini? Ngaba likhona ulwandle?
A: Sinonxweme olunamazibuko ayi-3 kodwa amanzi ayajinga ngokukhawuleza kunxweme. Kukho iindawo ezimbalwa apho incinci ngakumbi. Ukuze ufumane unxweme olunentlabathi, yiya kwi-Hayward City Beach engaphantsi kweemayile enye ukusuka kwindlu yamaplanga.
Umbuzo: Ngaba indlu yamaplanga inobushushu obumnandi?
A: Ewe kunjalo! Sinezinto zokugcina ubushushu zaseYurophu eziyigcina intle kwaye itofotofo ebusika. Indlu yamaplanga inendawo eyenza kufudumale ukuba ufuna ukuyifudumeza ngokukhawuleza.
Umbuzo: Liphi ishiti eliflethi ebhedini?
A: Ukuhambisana nomxholo wesitayile saseYurophu, ibhedi ineduveyi. Sitshintsha size sicoce ONKE amashiti qho emva kokuhlala kwaye siyazidla ngokucoceka kwethu. Sine enye ingubo egciniweyo ukuba uyayidinga.
Umbuzo: Ngaba ikhona indawo eyaneleyo yokupaka isikhephe okanye itreyini?
A: Ewe! Indawo yokupaka inkulu ngokwaneleyo kwiimoto ezininzi. Ukuba unevidiyo emfutshane, ungabuyela epakini kwiindawo ezintathu ezahlukeneyo. Sicela nje ukuba ungabloki nabani na omnye ngaphakathi.
Umbuzo: Ngaba sinesikhephe esiqalayo?
A: Hayi, ayikho kwindawo yethu kodwa ke kukho isikhephe sikawonke-wonke esikude kangangesiqingatha seemayile. Ungaqalisa isikhephe sakho apho uze usibophelele kwenye yezibuko zethu! Ingaphantsi kwesiqingatha seemayile ngesikhephe ukusuka ekuqalisweni kwayo ukuya ezibukweni.
Umbuzo: Luhlobo olunjani lweentlanzi eLake Hayward?
A: I-Musky, i-Panfish, i-Bass, i-Northern Pike, i-Trout, ne-Walleye.
Umbuzo: Ngaba sinezikhephe okanye izikhephe eziqeshwayo?
A: Hayi, asiyenzi loo nto iHayward Outfitters/iHayward Water Sports kwaye ingaphantsi kwesiqingatha seemayile, ecaleni nje kokuqaliswa kwesikhephe.
Umbuzo: Ngaba zikhona iindlela zokunyuka intaba ezikufutshane?
A: Kukho umzila owenziwe ngeenyawo kufutshane nendawo yokupaka xa uhamba ngeenyawo ixesha elifutshane. Kungenjalo jonga iHayward Chamber of Commerce ukuze unyuke intaba nezinye izinto ezenziwa phandle.
Umbuzo: Ngaba zikhona iindlela ze-ATV/ze-Snowmobile ezikufutshane?
A: Ewe. Indlela yokungena ihamba esitratweni ukusuka kwindawo yokupaka. Unokufumana iimephu zemizila kwisayithi ye-Hayward Lakes okanye kwisayithi ye-Sawyer County Alliance.
Umbuzo: Zikhona iindawo ezintle zokutya?
A: Kakade! Asikwazi ukucebisa kodwa sikucebisa ukuba ujonge iwebhusayithi yeHayward Chamber of Commerce ukuze ubone iindawo zokutyela zasekuhlaleni onokukhetha kuzo.
Ukuba unayo nayiphi na eminye imibuzo, ndiza kukuvuyela ukuyiphendula!
4.88 · Izimvo eziyi-254
Ekuqaleni yasekwa njengedolophu yokugawulwa kwemithi ngeminyaka yee-1800's, iHayward ngoku ilikhaya loBuntshatsheli beHlabathi beLumberjack, iAmerican Birkebeiner (umdyarho wehlabathi wokutyibiliza umtyibilizi wamazwe ngamazwe), umnyhadala wonyaka weChequamegon Fat Tire Festival (ugqatso olukhulu luqala umdyarho weebhayisekile entabeni eUnited. States), eyona pow-wow inkulu kuMntla Merika, kwaye, ngokuqinisekileyo, iholo yokuloba yamanzi acwengileyo yodumo! Eminye imisitho emininzi ethatha unyaka wonke iyenzeka kule dolophu incinci, inomtsalane kwaye naxa imisitho emikhulu ingenzeki kukho intaphane yemisebenzi yangaphandle enokonwaba - efana nokukhwela ibhayisekile, ukukhwela ihashe umva, ukuloba, ukukhenketha, ukutyibilika, ukutyibilika ekhephini, ukukhwela ikhephu, indlela. nokukhwela ibhayisekile ezintabeni, ukukhwela inqanawa, ukukhwela iphenyane, nokudlala igalufa.
Asikho eHayward kodwa sinokufikelelwa ngefowuni, itekisi okanye ngale ndawo ukuba unayo nayiphi na ingxaki okanye imibuzo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Hayward